1. pancake ကတကယ်လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ အနည်းငယ်သာပါဝင်ပစ္စည်းများ ထိုကဲ့သို့အထူးပစ္စည်းကိရိယာများမလိုအပ်ပါဘူး အရမ်း Beater သို့မဟုတ်မီးဖို သင်လိုအပ်သမျှတစ်ခုသည်ကြွေပြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ pancakes လုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားစွန့်ခွာရန်သင့်အားဖြင့်လွယ်ကူသော။ ဒီဟာကိုအိမ်မှာစမ်းကြည့်နိုင်တယ်
2. pancake အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ 1. ဂျုံမှုန့် 2. သကြား (အညိုရောင်သကြားဓာတ်အဖြစ်အကြံပြုသည်) 3. မုန့်ဖုတ်အမှုန့် 4. ထောပတ်သို့မဟုတ်ဆီ 5. Vanilla အမှုန့် ၆ ၇။ နို့ရည် ၈။ ချောကလက်၊ သစ်သီးယို၊ ပျားရည်၊
3. အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဂျုံမှုန့်၊ ladles ၂-၃၊ ၁ ဥ၊ နို့ရည်နို့ရည် ၂-၃၊ သကြား၊ လိုချင်သောချိုမြိန်မှုပေါ် မူတည်၍ သကြားပါ။ ထိုအခါလူတို့ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောမွှေပါစေ။ သင့်မှာ beater မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကကောင်းပါတယ် အစားသစ်သားခုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
4. ထို့နောက်အနည်းငယ်သောအရသာနှင့်အနံ့များအတွက် vanilla အမှုန့်အိတ်တစ်လုံးနှင့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်ခန့်မုန့်ဖုတ်သောအမှုန့်အနည်းငယ်မျှပါ ၀ င်ပြီး pancake ကိုပေါ့စေနိုင်သည်။ သို့သော်သတိထားပါ၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်များများများများမထည့်ပါနှင့်။
5. ဓာတ်ငွေ့ကိုဖွင့ ်၍ အပူကိုနိမ့်ကျအောင်ထားပါ။ ဆီ (သို့) ထောပတ်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီးဒယ်အိုးတစ်လျှောက်အထိခွက်တစ်ခွက်နှင့်ဖြန့်ပါ။
6. ထောပတ်အရည်ပျော်သွားချိန်တွင်ပြင်ဆင်ထားသော pancake Battery ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ယခင်ချက်ပြုတ်ထားသောဂျုံမှုန့်အမှုန့်မှ ၃-၄ အပိုင်းအစများရရှိနိုင်သည့်အခါ၎င်းဒယ်အိုးကိုပုံသဏ္roundာန်တစ်ခုသို့သွန်းလောင်းရန်အတွက် ladle သို့မဟုတ် ladle ကိုအသုံးပြုပါ။ ၆ ခုထွက်သင့်သည်။ -8 အပိုင်းပိုင်း, အကြောင်းကို2အစေခံရန်အဆင်သင့်
7. အခြားတစ်ဖက်ကိုမှန်ကန်စွာချက်ပြုတ်သောအခါအခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့်နိုင်သည်။ အရမ်းပြင်းလွန်းသောမီးမသုံးရန်သတိထားပါ။ ထိုအဘို့ဒယ်အိုးထားရန်ကြိုးစားပါ မီးသည်ဒယ်အိုးသို့အညီအမျှပေးပို့သည်။ အဆိုပါ pancakes တစ်ချိန်တည်းမှာချက်ပြုတ်ပါလိမ့်မည်။
8. ပန်းကန်လုံးပေါ်တွင်တင်ပါကချောကလက်၊ သစ်သီးယို၊ ပျားရည်၊ ကွတ်ကီး၊ သစ်သီးသစ်စသည်တို့သင်လိုချင်သည့်ထိပ်ဖျားဖြင့်အလှဆင်ပါ။ အဆိုပါ buttered ဗားရှင်းအညီအမျှအရသာပါ!
9. နေကောင်းလား? pancakes လုပ်တဲ့နည်းကမျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုလွယ်တယ်မဟုတ်လား။ ယခုသင်ကဖေးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်မလိုအပ်ပါ ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် သငျသညျသလောက်လိုချင်သလောက် toppings ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ၊ အစမှာအနည်းငယ်နှေးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ပိုမိုလေ့ကျင့်လိုလျှင် surelyကန်အမှန်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်လာလိမ့်မယ် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်စာရွက်ကိုတစ်ရက်တိုင်အောင်သင်သိလိမ့်မည် အဘယ်အရာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်မည်မျှထားရန် ချိုမြိန်မှုကိုမင်းကြိုက်သလိုလျှော့ချပါ။ pancakes ၏ကောင်းကျိုးများကိုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ နေဆဲသစ်ကိုအရသာခံစားပါ toppings နှင့်အတူ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးကတော့ Bananas နဲ့ Nutella ပဲ။ ဒါကြောင့်ဘာကိုကြိုးစားပြီးကြက်ဥတွေကိုအများဆုံးနဲ့စားရတာလဲ။